China High Ọcha Graphite Ebu ụlọ ọrụ na-emepụta | Jitai
A na-ejikarị ígwè akpụzi ọdịnala ọdịnala. Agbanyeghị, site na ịkpụzi ebu yana ebumnuche ha maka ụdị ebu a na - esiri ha ike ịbịaru ụdị ihe dị mgbagwoju anya ma jiri ihe mejupụtara rụọ ọrụ. Nke a bụ nsonaazụ nke ọnụọgụ ọkụ na-enweghị mmekorita dị n'etiti ebu n'onwe ya na ihe ndị edobere n'ime. Ya mere, graphite apụtawo dị ka ihe mbụ ịhọrọ maka ịkpụzi akpụzi n'ihi akụrụngwa ya na kemịkal ya chọrọ. Jitai na-ere nnukwu ụdị omenala dị ọcha nke na-acha ọcha nke nwere ike belata ọnụahịa maka ndị ahịa anyị.
Graphite bụ kristal kristal nke ihe mmewere carbon nwere njirimara ndị a:
1. magburu onwe thermal na eletriki conductivity;
2. Na-eguzogide ọgwụ corrosion na anaghị eme ngwa ngwa na ọtụtụ ọla
3. Low thermal mgbasa ọnụọgụ na ezi kwes kwụsie ike
4. Ezigbo mmanu mmanu na iyi mgbochi
5. Na-arụ ọrụ nke ọma na oke okpomọkụ (ọtụtụ ọla kọpa ọla na -eme ka okpomọkụ dị elu karịa 800 ℃). Ike na-abawanye n'otu oge na mmụba nke okpomọkụ
6. Arụ ọrụ arụmọrụ dị mma, enwere ike iji ya maka ebu na ụdị mgbagwoju anya yana n'ọnọdụ ebe oke nkenke dị mkpa.
1.Used nke na-aga n'ihu na ọkara na-aga n'ihu mgbatị nke na-abụghị ferrous ọla. Ruru ya ezi thermal conductivity na onwe-n'ite nke ihe, hà ingot anọ ezi, elu-anọgide na-eji ire ụtọ, na ya crystalline Ọdịdị mụ edo ọbụna mgbe ọtụtụ firings. Nke a na-enye ohere maka ịbawanye ọsọ ọsọ, na-ahụ na usoro ọzọ nwere ike ịmalite ozugbo na-esote. Nke a na-eme ka ọnụego mkpụrụ ngwaahịa na ogo ngwaahịa dịkwuo mma.
2. Ebu maka nkedo nrụgide: Ejirilarị grafụ nke artificial jupụta nke ọma maka nkedo mgbatị nke ọla na-abụghị nke ọla Ọmụmaatụ, zinc alloy na ọla kọpa alloy oge ọgbụgba emepụta na nsogbu mgbatị Ebu nke keakamere graphite ihe na-ugboro ugboro ji na ụgbọala akụkụ.
3. Ebu ebu maka ihe nkedo a na-emegharị: A na-arụ ọrụ nke ọma na ịkpụpụta eserese. Companieslọ ọrụ ndị United States ejiriwo ebu ihe mara mma nke gramị nwere ihe karịrị 25mm ka ọ bụrụ ọla kọpa, ọhịa, na aka uwe.
4. Ihe na-ekpo ọkụ na-akpụ akpụ ọkụ: Ihe eserese na-emepụta ihe eji eme ihe na-ekpo ọkụ nwere àgwà abụọ maka nrụgide nrụgide nke carbides ciment:
A) Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ n'oge ịpị na-abawanye na 1350 ruo 1450 ℃, nrụgide unit achọrọ nwere ike belata na 1 / 10th nke ihe ga-adị mkpa ma ọ bụrụ na ebu ahụ dị oyi.
B) Presspị na ikpo ọkụ na-arụ n'otu oge, a ga-enwetakwa ahụ dị nkedo mgbe naanị obere oge nsị.
5. Ebu maka ịkpụzi iko: Ihe grafite abụrụla ihe eji akpụzi ihe eji arụ ọrụ maka iko. Enwere ike iji ya mee ihe maka ịkọ maka ọkpọkọ iko, ikuku, funnels na ụdị ndị ọzọ dị iche iche.
6. Sintering Ebu na ndị ọzọ na diamond sintering Ebu: N'ihi na nke ala kwes mgbasa nke wuru graphite, sintering Ebu na brackets maka transistors nwere ike arụpụtara. Ejiri ya ugbu a ma bụrụzie ihe dị mkpa maka mmepe ụlọ ọrụ semiconductor.
Performance tụnyere nke ọtụtụ ndị na-eji ebu nhazi ihe na ọtụtụ ihe mejupụtara
Kwes Mgbasawanye ọnụọgụ
Glass Fiber / epoxy
Nke gara aga: Mkpuchi